रवि लामिछानेलाई खुल्ला मञ्चमा ल्याएर फासी दिइयोस : नायिका श्वेता खड्का — Imandarmedia.com
न्युज २४ टेलिभिजनमा “सिधा कुरा जनतासंग” कार्यक्रम चलाउदै आएका रवि लामिछाने प्रकरण यतिबेला खुब चर्चाको बिषय बनेको छ । विगतमा नेपाल टेलिभिजन र केही निजी रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँदा चलाउँदै अमेरिका भासिएका लामिछाने केही समयदेखि नेपालमै छन् ।
न्युज २४’ टेलिभिजनमा सबैभन्दा धेरै लामो समय ‘टक शो’ त कहिले ‘बुद्ध वाज बर्निङ नेपाल’ अभियान चलाएर रवि चर्चामा आइरहन्छन् । यसै कारण सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा र बिपक्षमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । खासगरी नेपाल टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम उत्पादन गरेर उनि चर्चामा आउन सुरु गरेका थिए।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल टेलिभिजनले सो कार्यक्रम चलाउन नदिएपछि रविले ‘न्युज २४’ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ सुरु गरेका थिए । उनी सो कार्यक्रम फेसबुकबाट प्रत्यक्ष लाइभ पनि चलाउँछन् । समसामयिक विषयवस्तु, सरकारको विरोध, भ्रष्टाचार, अत्याचारलाई उनले आफ्नो कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने बताउदै आइरहेका छन्।
अवसर पाएको बेला अमेरिका भासिएर नेपालको नागरिकता त्याग गरेका रविले अमेरिकी नागरिकको हैसियतमै नेपाली मिडियामा कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेका थिए । अराजक प्रस्तुति मार्फत अपरिपक्व सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको झुण्ड बटुलेर केही देखावटी राम्रा कामहरु गर्दै स्थापित हुन खोजेका रविले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग नगरी कार्यक्रम चलाईरहेपछि ब्यापक बिरोध भएको थियो ।
उनको चौतर्फी बिरोध र आलोचना हुन सुरु गरेपछि उनले हालै अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता परित्याग गरेका छन् । र नेपाली नागरिका लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । एक देशको नागरिकता परित्याग नगरी अर्को देशको नागरिकता नपाइने हुदा यसअघि नै रविले नेपाली नागरिकता त्यागेर मात्र अमेरिकी नागरिक बन्न पाएका थिए ।
अब उनले पुनः नेपाली नागरिक बन्नका लागी सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उनि नेपाली नागरिक भएपछि मात्र नेपालका मिडियामा नियुक्त हुने अधिकार राख्दछन् र काम गर्न पाउने हुन्छ ।
यसैबीच नायिका श्वेता खड्काले बिहीबार फेसबुकमा रबि लामिछानेलाई फासी दिइनुपर्ने आसयको स्टाटस लेखेकी छन् । उनले लेखेको फेसबुक स्टाटस जस्ताको तस्तै:
सरकार, रबी लामिछानेलाई खुल्ला मन्चमा ल्याएर फाँसी दिईओस !
फेसबुकको भित्तोमा लाइभ कार्यक्रम मार्फत आम-जनतासंग जोडीएर समसामयीक बिसयको बारेमा जानकारी दिने बहानामा ‘हिरोइज्म’ प्रदर्शन गरिरहेका र न्युज २४ मार्फत ‘जनतासंग सिधा कुरा’ नामक कार्यक्रम मार्फतटेलिभिजन कार्यक्रम समेत चलाऊंदै गैर्‍हकानुनी पत्रकारिता गरिरहेका रबी लामिछानेलाई शायदै नचिन्ने, नसुन्ने र र नदेख्ने कमै होलान । शायद देशका प्रधानमन्त्री को नाम नसुन्ने धेरै भेटिएलान तर रबी लामिछानेको नाम नसुन्ने बिरलै पाइएलान । अत: अमेरिकी पासपोर्टधारी भनिएका यी रबी लामीछानेलाई यत्तिखेर कानुनी संकटले घेर्न थालेको छ । प्रेस पास समेत नलिई नातेदार भिशामा नेपाल छिरेका रबी लामिछाने, सम्भवत देशबाटै लखेटिने अवस्थामा पुगेका छन वा पुग्न लागेका छन ।
म उनलाई देशबाट लखेट्ने पक्षको घनघोर बिरोध गर्छु, किनकी उनले गैर्‍हकानुनी रुपमा हाम्रो देशमा छिरेर उदण्ड मच्चाएका छन । धेरै जना नेपालीहरुको भोक,प्यास र निन्द्रा खल्बल्याएका छन । अनी हाम्रो शान्ती, अमन र चयनमा खलल पुर्‍याएका छन ।
त्यसैले म त उनलाई देश निकाला गर्नु भन्दा पनि फाँसीनै दिनु पर्छ भन्ने मन्यता राख्दछु र सरकार समक्ष रबी लामिछानेलाई खुल्ला मन्चमा ल्याएर हामी आमजनताको सामु खुल्लेयाम फाँसी दिन हुन जोडदार माग गर्दछु । मेरो यो माग जायज हो कि होइन त्यो त मलाई थाहा छैन तर निज रबी लामिछानेले गरेका गैर्‍ह कानुनी कार्यको फेहरिस्त हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ उनलाई फाँसी को सँजाय पनि कमनै हुन्छ कि ? किनकी यिनले गर्नै नहुने धेरै कार्यहरु गरेका छन ।
रबी लामिछानेले अहिलेसम्म जे जे गरे ति सबै कृयाकलापहरु समाजबोरिधी छन । जुन देशको महान संस्कारनै ‘भ्रस्टाचार’ हो, त्यही संस्कारलाई भात्काउन खोज्ने रबी लामिछाने ‘महापापी’ हुन । जुन देश ‘अनियमितता’ को श्रीङ्गारमा आफ्नो खोक्रो सुन्दरता देखाई रहेको हुन्छ त्यही श्रीङ्गारलाई लत्पत्याएर कुरुप बनाउन खोज्ने रबी लामिछाने एक ‘अपराधी’ हुन । मानव बेचबिखनलाई आफ्नो पेशा बनाएर जसोतसो जीवन यापन गरिरहेका मेहनती तस्करिहरुको पेशानै धरापमा पार्न खोज्ने रबी लामिछाने ‘शोषकी’ हुन ।
बिदेशमा बेचिन पुगेका नेपाली चेलीहरुको आँशुलाई टेलीभिजनको पर्दामा देखाएर उनिहरुको उद्दार गर्नखोज्ने रबी लामिछाने ‘प्रेश पास’ समेत नलिने ‘पित पत्रकार’ हुन । आर्काको घरमा पसेर ‘ घरेलु हिंशा’को खोजखबर लिने अधिकार उनलाई कस्ले दियो ? बिना स्विक्रिती सरकारी कार्यालयहरुमा प्रवेश गरेर घुम्ने मेच माथि मस्त निदाई रहेका हाकिमहरुको निद्रा खल्बल्याउने रबी लामिछाने ‘मानव अधिकार’ बिरोधी हुन । देशको सिमानामा पुगेर हराएका र चोरि भएका स्थम्भहरु खोज्ने रबी लामिछाने ‘ देश द्रोही’ हुन । उनी असामाजिक तत्व हुन, जस्ले अन्याय र अत्याचार सहेर मौन बसेको हाम्रो समाजमा आफ्ना ‘कटु’ शब्दहरु मार्फत होहल्ला मच्चाई रहेकाछन ।
यिनी कि त मुर्ख हुन कि त पागल । शायद यिनलाई थाहा छैन , यो देशमा गर्ने भन्दा बोल्ने अनी बोल्ने भन्दा मौन बस्नेलाई पुजिन्छ । यहाँ, जस्ले सामाजिक बिकासको पाइला चाल्छ उस्ले हजार पटक लड्नु पर्छ र चोटै चोट खाएर बिच बाटो रोक्किनु पर्छ ।
यिनले सुन्तली धुर्मुस र मेनुका थापाहरुको भोगाईहरुबाट सिक्नु पर्ने हो , सिकेनछन । हाम्रो समाजमा स्वच्छ छबीका मान्छेहरु सुहाँउदैनन । हामीलाई रबी लामिछाने, सुन्तली धुर्मुस, मेनुका थापा र अनुराधा कोइरालाहरु चाहिदैनन ।
हामी हाम्रै हालतमा ठीक छौ, खुशी र सुखी छौ । त्यसैले हाम्रो सुख र खुशीमाथी धावा बोल्ने अधिकार रबी लामिछानेहरुलाई कस्ले दियो ? त्यसैले म सरकार समक्ष रबी लामिछाने लाई खुल्ला मन्चमा ल्याइयोस र हामी आमजनताहरुको अगाडि खुल्लेयाम फाँसी दिईयोस भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । जुनाबेला रबी लामिछाने फाँसिको सुलीमा झुण्डीएका हुनेछन त्यत्तीबेला हामी सरकारको पक्षमा तालीको गडगडाहटले राजाधानीलाई गुन्जायमान बनाउँदै ‘सतीले सरापेको देश’ भन्ने कथनलाई सार्थक बनाइदिने छौ ।